पुरुषका लागि गर्भ निरोधक खोप एक पटक लगाएपछि १३ वर्षसम्म प्रभावकारी – Krazy NepaL
April 9, 2021 470
अहिलेसम्म बजारमा ग,र्भ नि,रोधकका जति पनि खोप तथा औषधि उत्पादन भएका थिए ती महिलाहरुका लागि थियो। पुरुषका लागि ग,र्भनि रोधको एउटा मात्रै उपाय क,ण्डम थियो तर, निकट भविष्यमा नै भारत लगायतका मुलुकमा पुरुषका लागि ग’र्भनि रो’धक खो’प बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ यो खोप एकपटक लगा’एपछि १३ वर्षसम्म प्रभावकारी हुने अनुसन्धानमा पत्ता लगाइएको छ ।
इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) का अनुसार पुरुषका लागि बनाइएको उक्त खो’प विश्वस्तरीय रुपमा सुरक्षित, प्रभावकारी र लामो समयसम्मका लागि उपयोगी साबित हुनेछ। यसको प्रयोग ३०० जना पुरुषमा गरिएको छ । तीन पटकसम्म चलेको उक्त क्लिनिकल ट्रायलमा साइ’ड इफे’क्ट नभेटिएको आईसीएमआरले जनाएको छ ।
आईसीएमआरका सीनियर वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार तयार भएको उक्त खोपका लागि भारतीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक रहेको छ । ट्रायलमा उक्त खोपको प्रभावकारीता ९७.३ प्रतिशत भएको डा. शर्माले जनाएका छन् उक्त खोप संसार कै पहिलो पुरुष ग’र्भ निरो’धक खो’प हुन सक्ने डा.शर्माले बताए।
Prevबिष्णु माझी सार्वजनिक नहुनु र उनको अर्को फोटो नबन्नुको कारण यस्तो रहेछ
Nextआँखामा अन्नो आएर सताउँछ ? यसरी गर्नुहोस् उपचार नत्र आँखामा संक्रमण हहुने खतरा!